DEGDEG:Baladweyne Dowladda oo ku guulaystey Ciidamadii muranka uu ka dhashey in ay geeyso Dhuusamareeb — CAASIMADA
Home WARARKA MANTA DEGDEG:Baladweyne Dowladda oo ku guulaystey Ciidamadii muranka uu ka dhashey in ay...
DEGDEG:Baladweyne Dowladda oo ku guulaystey Ciidamadii muranka uu ka dhashey in ay geeyso Dhuusamareeb
Wararka laga helayo Magalada Baladweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan in goordhow halkaasi ay ka baxeen Ciidamadii ka tirsanaa Maamulka Hir-Shabeelle ee muranka uu ka dhashay,kuwaas oo Maanta u ambabaxay Magalada dhuusamareeb.
Ciidamadaan oo weli tiradooda aan la shaacin ayaa waxaa shalay tababar loogu soo xiray Magalada Baladweyne,waxaana qaadistooda horay u diiday Odayaasha & Waxaradka Magalada Baladweyne,hayeeshee Saraakiil Ciidan ayaa Risaala u xaqiijiyay in Maanta la qaaday.
Ciidamada oo Baladweyne looga qaaday Gaadiidka Waaweyn ee Ciidamada Dowladda ayaa waxaa marka hore la geeyay Xerada Ceel-Jaale ee duleedka Baladweyne,iyada oo markii dambe laga sii qaaday.
Amarka lagu qaday ciidamadaan ayaa warar soo baxayay waxaa ay sheegayeen inay bixisay dowladda federaalka Soomaaliya,waxaana Taliyaha guutada 5aad ee qeybta27 aad Faarax Cali Waasege oo shalay la hadlayay boqolaal ka mid ah Ciidankaas ayaa sheegay inu fuli doona amarka dowladda islamarkaana Ciidamada la geyn doono halkii ay dowladda amarto.
Lama oga waxa ay yeeli doonaan Odayaasha dhaqanka Gobolka Hiiraan oo uu qeyb ka yahay Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo ka mid ah salaadiinta gobolka Hiiraan,kuwaas oo dhowr mar diiday in Ciidamadaas ka tirsan Maamulka Hir-Shabeelle loo qaado Dhuusamareeb.
Previous article(Daawo Sawirada)Jaamacadda Jazeera oo ku talaabsatey hormar xiriir iskaashina la saxiixatay Jaamacad ku taal Masar
Next articleDeg deg:-Diyaarad waday ilaalada Madaxweyne Farmaajo oo gaartay Dhuusamareeb iyo warar sheegaya in..
Shir degdeg ah oo la xiriira xayiraadii Maanta sheikh Shariif oo...
Galmudug Oo ku hanjabtey in tallaabo ay ka qaadeyso Odoyaashii...